Ronaldo Oo Riixaya Inuu Ku Biiro Man City – Wuxuu La Hadlay Dias Iyo Silva – Garsoore Sports
Ronaldo Oo Riixaya…
Cristiano Ronaldo ayaa wali isku dayaya inuu qasbo inuu u dhaqaaqo Manchester City iyadoo wakiilkiisa Jorge Mendes uu shaqeynayo waqti dheeri ah si uu heshiis u dhaqan-geliyo.
Xiddigii hore ee Manchester United iyo Real Madrid ayaa galay sannadkii ugu dambeeyay ee qandaraaskiisa Juventus waxaana si joogta ah loola xiriirinayay inuu ka tagayo Turin xagaagan.
Inkastoo Juventus ay ku adkeysaneyso in 36 jirkaan uusan codsan inuu baxo, haddana wararka la isla dhexmarayo warbaahinta ayaa sii kordhaya iyadoo L’Equipe uu haatan soo warinayo in ciyaaryahanka uu isku dayayo inuu kusoo laabto Premier League-ga.
Warbixintu waxay ku nuuxnuuxsanaysaa in heshiis kasta uu noqon doono mid aad u cakiran wuxuuna ku xirnaan doonaa haddii City ay kala soo wareegeyso Tottenham Harry Kane iyo haddii ay iska dhaafeeyso oo ay isaga u dhaqaaqayso.
Laakiin haddii kooxda heysata Premier League ay seegto xiddiga heerka caalami ee dalka Ingiriiska, wakiilada Ronaldo ayaa ku riixi doona City inay Ronaldo usoo dhaqaajiyaan Etihad.
Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa in uu la hadlay xiddigaha reer Portugal ee kooxda Manchester City Ruben Dias, Joao Cancelo iyo Bernardo Silva isaga oo kala hadlay suurtagalnimada uu ugu biiri karo Cityzens waxaana uu ku kalsoon yahay in heshiiska la wada gaari karo.
Mendes, oo ah wakiilka Ronaldo, ayaa sidoo kale baaraya heshiis is-weydaarsi oo macquul ah oo sababi kara in Bernardo Silva iyo Ronaldo ay isdhaafaan. Aymeric Laporte waa xiddig kale oo ku lug yeelan kara heshiiska isdhaafsiga ah.
Waxaa lagusoo waramayaa in kaliya afar kooxood oo kamid ah kooxaha adduunka ay awoodaan inay la jaanqaadaan mushaharka Ronaldo ee 31 milyan oo yuuro ah sannadkii laakiin halyeeyga United ayaa aad u xiiseeynaya City, halkaas oo uu rumeysan yahay inay ku habboonaan doonto inuu ku tartamo billado badan oo Ballon d’Or ah.